တရုတ်နိုင်ငံ မဟာပင်လယ်အော်ဒေသ ရေအောက်ဥမင်လှိုဏ်ခေါင်းတည်ဆောက်မှု၏ ဥမင်ဖြတ်ပိုင်းတုံးများ ချိတ်ဆက်မှု စတင်ဆောင်ရွက် - Xinhua News Agency
အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံ မြို့တော် အာဒစ်အာဘာဘာမြို့တွင် ဇွန် ၁၉ ရက်၌ ဝန်ထမ်းများက တရုတ်နိုင်ငံ မှ ကူညီထောက်ပံ့ပေးသည့် COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးများ ရေတွက်နေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ကွမ်ကျိုး ၊ ဇွန် ၂၀ ရက်(ဆင်ဟွာ)
အလျား၂၄ ကီလိုမီတာရှိသော ပင်လယ်ရေအောက်ဥမင်လှိုဏ်ခေါင်းပါ အဝေးပြေးလမ်း စီမံကိန်းသစ် တစ်ခုကို တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း ကွမ်တုံး-ဟောင်ကောင်-မကာအို မဟာပင်လယ်အော်ဒေသ၌ ဒေသတွင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး တွန်းအားပေးနိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ တည်ဆောက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ဆန်းကျန့် (Shenzhen)- ဇောင်းရှန်း(Zhongshan) ပင်လယ်ဖြတ်ကျော် အဝေးပြေးလမ်းပိုင်းသည် လာမည့် ၂၀၂၄ ခုနှစ်တွင် အလုံးစုံပြီးမြောက်မည်ဖြစ်ရာ ဆန်းကျန့် နှင့် ဇောင်းရှန်း မြို့နှစ်မြို့ကြား ခရီးသွားလာမှုကြာချိန်ကို ၂ နာရီမှ မိနစ် ၃၀ အထိ လျှော့ချပေးသွားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း ကွမ်တုံးပြည်နယ် ရှိ Shenzhen-Zhongshan ပင်လယ်ဖြတ်ကျော် အဝေးပြေးလမ်းပေါ်ရှိ ရေအောက်အနက်ရှိုင်းဆုံးအပိုင်း ဥမင်လှိုဏ်ခေါင်းတည်ဆောက်ရေးအတွက် တပ်ဆင်ရေး အင်ဂျင်နီယာသင်္ဘောပေါ်ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇွန် ၁၈ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ယင်းလမ်းပိုင်းပေါ်တွင် ပါဝင်သည့် အရှည် ၆.၈ ကီလိုမီတာရှိသော ရေအောက် ဥမင်လှိုဏ်ခေါင်းတစ်ခုထဲတွင် ၈ လမ်းသွား အဝေးပြေးလမ်းမကြီးကို ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထားပြီး ဉမင်လှိုဏ်ခေါင်းတစ်လျှောက် ဥမင်ဖြတ်ပိုင်းတုံး ၃၂ တုံး ထည့်သွင်း တပ်ဆင်သွားမည်ဖြစ်ရာ ယင်းဖြတ်ပိုင်းတုံးများမှာ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု မကြာမီတွင် အပြီးသတ်ချိတ်ဆက်နိုင်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း ကွမ်တုံးပြည်နယ် ရှိ Shenzhen-Zhongshan ပင်လယ်ဖြတ်ကျော် အဝေးပြေးလမ်းပေါ်ရှိ ရေအောက်အနက်ရှိုင်းဆုံးအပိုင်း ဥမင်လှိုဏ်ခေါင်း၏ ဥမင်ဖြတ်ပိုင်းတုံးများကို အင်ဂျင်နီယာများက ၂၀၂၁ ခုနှစ် ခုနှစ် ဇွန် ၁၈ ရက်က တပ်ဆင်နေသည်ကိုတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း ကွမ်တုံးပြည်နယ် ရှိ Shenzhen-Zhongshan ပင်လယ်ဖြတ်ကျော် အဝေးပြေးလမ်းပေါ်ရှိ ရေအောက်အနက်ရှိုင်းဆုံးအပိုင်း ဥမင်လှိုဏ်ခေါင်း တည်ဆောက်ရေးတွင် ထိန်းချုပ်ရေးသင်္ဘောပေါ်၌ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေကြသော ဝန်ထမ်းများအား ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇွန် ၁၈ ရက်ကတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)ပြီးခဲ့သော ဇွန် ၁၈ ရက်က ဥမင်လှိုဏ်ခေါင်း တည်ဆောက်ရေးအင်ဂျင်နီယာများသည် ပင်လယ်ရေအောက် အနက် ၄၀ မီတာကျော်တွင် တည်ဆောက်ရသည့် ရေအောက်အနက်ရှိုင်းဆုံးအပိုင်း ဉမင်ဖြတ်ပိုင်းတုံးများ ချိတ်ဆက်မှုအတွက် ခင်းကျင်းတပ်ဆင်မှုကို စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
New immersed tunnel under construction in China’s Greater Bay Area
GUANGZHOU, June 19 (Xinhua) — A new 24-km highway project under construction may further enhance regional transportation in Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area in south China.
Upon completion in 2024, the Shenzhen-Zhongshan cross-sea highway will shorten the travel time between Shenzhen and Zhongshan from two hours to just 30 minutes.
The 8-lane cross-sea highway link featuresa6.8-km undersea tunnel, which consists of 32 immersed tubes and one final closure joint.
On June 18, engineering workers have started laying the tunnel’s deepest immersed tube, set at over 40 meters below sea level.
(1/2) An engineering vessel sets out for the location where staff members will be installing the deepest tunnel section of the Shenzhen-Zhongshan cross-sea highway in south China’s Guangdong Province, June 18, 2021. (Photo by Dong Yonghe/Xinhua)
(3)Staff members install the deepest tunnel section of the Shenzhen-Zhongshan cross-sea highway in south China’s Guangdong Province, in the wee hours of June 19, 2021. (Photo by Dong Yonghe/Xinhua)
(4) Staff members on board an engineering vessel help install the deepest tunnel section of the Shenzhen-Zhongshan cross-sea highway in south China’s Guangdong Province, June 18, 2021. (Photo by Dong Yonghe/Xinhua)